अस्ट्रेलियामा कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क
काठमाण्डौ । अस्ट्रेलियाले छिटै तयार हुने आशा गरिएको कोरोनाविरुद्धको खोप आफ्ना नागरिकका लागि नि:शुल्क दिने जनाएको छ। त्यो खोप औषधि कम्पनी आस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरिरहेका छन् र अहिले परीक्षणको क्रममा छ। प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले परीक्षण सफल भएमा आस्ट्राजेनेकासँगको सम्झौताले हरेक अस्ट्रेलियालीका निम्ति...
कोरोनाविरुद्धको चिनियाँ भ्याक्सिन सन् २०२० को अन्त्यसम्म बजारमा आउने
काठमाण्डौ । चीनको फार्मा कम्पनी सिनोफार्मले सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन बजारमा आउने दाबी गरेको छ। सिनोफार्मका अध्यक्ष लिउ जिंगझेनले सञ्चारकर्मीसँग भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको ट्रायल यूएईमा भइरहेको र डिसेम्बरसम्म बजारमा आउने दाबी गरेका छन्। यो भ्याक्सिनको ट्रायलका क्रममा अध्यक्ष लिउ आफैँले दुई डोज लगाएका...
कोरोना संक्रमण क–कसबाट फैलिने खतरा बढी ?
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसबाट हालसम्म विश्वभर २ करोड १७ लाख ७० हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। तीमध्ये ७ लाख ७२ हजार बढीको ज्यान गइसकेको छ। यो भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वका विभिन्न देशमा भ्याक्सिन तथा औषधि विकासका कामहरु भइरहेका छन्। तर अहिले पनि यो भाइरस तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ। यसबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन...
कोरोनामुक्त घोषित न्युजिल्याण्डमा १०२ दिनपछि फेरि भेटिए सङ्क्रमित
काठमाण्डौ । कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भनेर घोषणा गरिएको न्युजिल्याण्डमा १०२ दिनपछि फेरि सङ्क्रमित भेटिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरुले चारजना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएको पुष्टि गरेका छन् तर उनीहरु समुदायबाट सङ्क्रमित नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकाबाट प्रकाशित हुँदै आएको वासिङ्टन पोष्टले लेखेको समाचारमा न्युजिल्याण्डकी प्�...
रुसी कोरोना भ्याक्सिनमा फिलिपिनी राष्ट्रपतिलाई भरोसा, भन्छन्– ‘पहिलो प्रयोग म गर्छु’
काठमाण्डौ । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले रुसको कोरोनाभाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन विकासको प्रयासलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार राष्ट्रपति डुटेर्टेले रुसको कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनको परीक्षणमा आफू स्वयं सहभागी हुने इच्छासमेत जाहेर गरेका छन्। रुसले आफूले विकास गरिरहेको यो...
चीनको कोरोना भ्याक्सिन निर्णायक चरणमा, सन् २०२१ को सुरुआतमै आउनसक्ने
काठमाण्डौ । चीनको सिनोभ्याक बायोटेक लिमिटेडले मंगलबार कोरोना भ्याक्सिनको अन्तिम चरणको ह्युमन ट्रायल सुरु गरेको छ। यो भ्याक्सिनको अन्तिम ट्रायल इन्डोनेसियाका १ हजार ६२० बिरामीमा सुरु गरिएको हो। यो भ्याक्सिन इन्डोनेसियाको सररकारी कम्पनी बायो फार्माका साथ मिलेर बनाउने काम भइरहेको छ। यसअघि सोमबार सिनोभ्याकले दोस्रो चरणको...
काठमाण्डौ । इजरायलले कोरोनाभाइरसविरुद्ध प्रभावकारी असर गर्ने भ्याक्सिन विकास गरेको दाबी गरेको छ। इजरायलले विकास गरिएको भनिएको भ्याक्सिनलाई मावनपरीक्षण गर्न सरकारी अनुमतिको पर्खाइमा रहेको जनाएको छ। यो भ्याक्सिनको मानवपरीक्षणलाई सम्भवत शरदकालीन छुट्टीपछि गर्न सकिने जनाइएको छ। इजरायलका रक्षामन्त्री बेनी गान्टजले इजरायल...
कोरोनाविरुद्धको रुसी भ्याक्सिनमाथि डब्ल्यूएचओको शंका, सावधान रहन आग्रह
काठमाण्डौ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले रुसले विकास गरेको कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनमा सन्देह जनाएको छ। रुसले आउँदो अक्टोबरबाट कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन सुरु गर्ने खबर सार्वजनिक भएलगत्तै डब्ल्यूएचओले रुसी भ्याक्सिनमाथि सन्देह जनाएको हो। डब्ल्यूएचओले भ्याक्सिन उत्पादनका लागि गाइडलाइनहरु बनाइएको भन्दै रुसी...
काठमाण्डौ । विश्व महामारी कोरोनाभाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन विकासमा रुसले अमेरिका, चीन र बेलायतलाई पछाडि पार्ने भएको छ। रुसले आगामी अक्टोबर महिनामा देशभर ठूलो स्तरमा कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यद्यपि रुसले गर्न लागेको यो खोप कार्यक्रमका विषयमा भने स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि भने भएको छैन। यदि रुसी कोरोना...
काठमाण्डौ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा कोरोनाभाइरस कमजोर हुँदै गएको दाबी गरेका छन्। अमरिकी न्युज वेबसाइट एक्सिओससँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले पछिल्लो एक साताको अवधिमा कोरोना संक्रमणको मामिलामा ६ प्रतिशत गिरावट आएको जानकारी गराए। उनले अमेरिकाको स्थिति अन्य देशको तुलनामा राम्रै रहेको दाबी पनि गरे। ट्रम्पले...
सायद कोरोनाविरुद्धको प्रभावकारी भ्याक्सिन पत्तै नलाग्ला : डब्ल्यूएचओ
काठमाण्डौ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रमुख डा टेड्रोस एडोनोम गेब्रिएससले कोरोनाभाइरविरुद्धको भ्याक्सिन चाँडै उपलब्ध हुने आश रहे पनि उपयुक्त र भरपर्दो भ्याक्सिन पत्तै नलाग्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। प्रमुख टेड्रोसले अहिले नै प्रभावकारी भ्याक्सिन पत्ता लाग्ला भन्ने सकिने अवस्था नरहेको र सायद पत्तै नलाग्न सक्ने...
इरानले लुकायो कोरोनाबाट मृत्यु भएको सही तथ्यांक, वास्तविक संख्या तीनगुणा बढी
काठमाण्डौ । इरानमा कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएका नागरिकको संख्या सरकारले दाबी गरेकोभन्दा झन्डै तीन गुणा बढी भएको बीबीसी पर्सियन भाषा सेवाले पत्ता लगाएको छ। इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुलाई २० सम्म १४,४०५ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको बताए पनि सरकारी दस्तावेजमा त्यो संख्या झन्डै ४२,००० भएको देखिएको छ। सङ्क्रमितको...
अक्सफोर्डद्वारा तयार पारिएको कोरोना भ्याक्सिनको भारतमा परीक्षण हुने
काठमाण्डौ । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीद्वारा बनाइएको कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनको दोस्रो र तेस्रो ह्युमन क्लिनिकल ट्रायल (मानिसमा परीक्षण) भारतमा हुने भएको छ। ड्रग्स कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डिया (डीसीजीआई) ले भारतमा उक्त भ्याक्सिनको दोस्रो र तेस्रो ह्युमन क्लिनिकल ट्रायलको अनुमति दिएको हो। यो ट्रायल भारतमा सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले...
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन हरेक वर्ष लगाउनुपर्ने !
काठमाण्डौ । दिग्गज फर्मा कम्पनी एस्त्राजेनेकाले भविष्यमा विकास हुने कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन प्रत्येक वर्ष लगाउनुपर्ने हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ। कोरोनाविरुद्धको सम्भावित खोप विकास गर्न लागिपरेको एस्त्राजेनेका एक्लो बेलायती कम्पनी हो। कम्पनीले कोरोनाविरुद्धको खोपको अन्तिम परीक्षण बेलायत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा...